ကောင်းကင်ဖြူ: LIVING TOGETHER နှင့် အမျိုးသမီး အခွင့်ရေး
ဦးလေးကတော့ ရေးတတ်ပါ့ဗျာ မှတ်သားသွားပါတယ်
လမင်းငယ် January 12, 2012 at 5:35 PM
Candy January 12, 2012 at 6:36 PM
ဒီလိုလေး တကူးတက ရှာဖွေရေးသားပေးတာ လေးစားပါတယ် :D :D
SHWE ZIN U January 12, 2012 at 9:51 PM
ဘယ်အချိန်တင်တင် စောင့်ဖတ်ပါမယ် မောင်ဘုန်း ရေ
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) January 13, 2012 at 5:51 AM
ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေး ယဉ်ကျေးမှုအတွက် law တွေကို ပြဌာန်းသင့်တယ်လို့ အရင်ကတည်းက တွေးမိနေတာာာ အခြေခံကျတဲ့ အချက်တွေကိုပေါ့ဗျာာာ သူများနိုင်ငံတချို့မှာလည်းရှိနေကျင့်နေတာပဲလေ တုကေင်းတဲ့ ဘာသာရေးဥပေဒေတွေရှိပါတယ်
jasmine(တောင်ကြီး) January 13, 2012 at 7:06 AM
ဒီမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဥပဒေရှိတယ် မြန်မာထက်ပိုပြီးပြင်ထန်တယ် မောင်ဘုန်းနဲ့ခင်တဲ့ မလေးလူမျိုးအစ္စလာမ် တစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ပါ မသိအောင်နေလို့ရတယ် သိပြီး
ရပ်ကွက်ကလူကြီးတွေရဲတွေဝင်စစ်လို့ အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေလက်ထပ်စာချုပ်မပြနိုင်ရင်
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကြိမ်ဒါဏ်နဲ့ထောင်ဒါဏ် နှစ်ခုပေါင်း
တရုတ်နဲ့ တမယ်ကုလားတွေတော့ ဥပဒေမရှိဘူးပြောတာပဲ ဒီနားမှာအများကြီးပဲ မြန်မာတွေဒါကြောင့်မပြောတော့ဘူး
မလေးမလေးတွေအကြောင်းကိုတော့စကားစပ်လို့ပြောမိတာပါ----ကာဂျမ်းထောင်ထဲမှာတောင် ရှိနေတယ် အင်ဒိုမလေးတွေနဲ့မလေးမလေးတွေ စာချုပ်မရှိပဲ
အဲဒီလိုနေလို့တဲ့လေ.... အခုမောင်ဘုန်းရေးတာလဲ ရေးသင့်တာကြာပြီ
ဘာကြောင့်ခုမှရေးတာလဲ...ဒီနားကမြန်မာစစ်စစ်မလေးတွေကိုလဲဖတ်စေချင်တယ် ရေးပြပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်တယ်မောင်ဘုန်းရေ နောင်လဲဒီလိုလေးတွေလုပ်ပါနော်
living together နေထိုင်မှု့မှာ အမျိုး သမီး တွေ ဥပဒေ အရ ကာကွယ် မှု့မရှိဘူး ဆိုတာတော့ အမှန် ပါပဲ ... ။
ဒါပင်မဲ့ ... အမျိုး သမီး အခွင့် ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အားနည်း နေတယ် ဆို တာ စာရေး သူဖော် ပြထားတဲ့ ဥပဒေ ပဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး လေ ...
ဥပမာ အနေ နှင့် ၁၉၇၄ ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း (၁၁) မှာ ပါရှိတဲ့ ၊ ပုဒ်မ (၁၄၇) နှင့် ပုဒ်မ (၁၅၄- ဃ) တို့မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အမျိုး သမီး ဆိုင်ရာ အခွင့် အရေး တွေ ဟာ နိုင်ငံ တကာ နှင့် ယှဉ် လို့ ပါတယ် ... စာရေး သူအနေ နှင့် ဘာကြောင့် ချန်ထား ခဲ့ သည်တော့ မသိပါ ......
မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ဦး ....
မောင်ဘုန်း January 13, 2012 at 7:59 AM
ဟုတ်ကဲ့ ပါ … အခု လို ကျနော် ရေးသားသော post လေး အချိန် ပေးပြီး ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဆိုသော … သူ ကို ကျနော် မောင်ဘုန်း မှ ကျေးဇူးတင်ရှိ ကြောင်း ဦးစွာ ပြောလိုပါတယ် ။
မြန်မာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆို သော … အစ်မ ရေ …
ကျနော် ရေးသာ ဖော်ပြ ထားသော အမျိုး သမီး အခွင့် ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ များ မှ အားနည်း ချက်တချို့ကို ဖော်ပြ လိုက် ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် … အမျိုးသမီး အခွင့်ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အားလုံး ပါလို့အထက်ပါ post မှာ ရေးသား ထား ခြင်း မရှိပါဘူး …
နောက်တစ်ခု …. ဟုတ်ပါတယ် … အမ ပြောထား တဲ့ ဥပဒေ တွေ ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ပါတယ် အစ်မ ပြောသလို နိုင်ငံတကာ အဆင့် မှီ တဲ့ အခွင့်ရေးတွေပါ ။ အစ်မ ပြောတဲ့ ဥပဒေ အပြင် ခေတ်အဆက်ဆက် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ များ လည်းရှိပါသေး တယ် … ကျနော် မှတ်သား မိသလောက် ဖော်ပြ ရသော် ….
ဆက်ရေးမယ်နော် comment မှာ စာအများကြီး ရေးလို့ တင်လို့မ၇လို့ ပါ ...
မောင်ဘုန်း January 13, 2012 at 8:12 AM
(၁၉၃၄-၁၉၃၈) ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းမများ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အမျိုးသမီး များ အတွက် ဥပဒေ အရ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် ပေးတဲ့ ပထမ ဆုံး ဥပဒေ လို့ပြောလို့ ပါတယ် ..။
ထိုနောက် (၁၉၄၈) ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ မှာ rights and equality ညီမျှမှု အခွင့်အရေးများဆိုတဲ့ အခန်း (၂) အရ ….. အနှစ်သာရ အရကတော့ ခွဲခြားခြင်း မပြုရ ၊ ညီမျှသော အခွင့်အလမ်း ရှိရမည်။ တူညီတဲ့ လုပ်ခအတွက် တူညီတဲ့ လခ ရှိရ မည် (ဇာတိ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ) ။
ထို့ အပြင် အစ်မပြောတဲ့ ၁၉၇၄ ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မှာ ပါတဲ့ အခန်း (၁၁)၊ ပုဒ်မ (၁၄၇) ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ တန်းတူညီမျှမှု ရှိရမည်။ ပုဒ်မ (၁၅၄-က) မှာ ဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနည်းတူ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးတွေမှာ တန်းတူ ရည်တူ အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ ရေးထားသလို၊ ပုဒ်မ (၁၅၄- ဃ) မှာလည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေး၊ လင်မယား ကွာရှင်းရေး၊ ပစ္စည်းခွဲဝေရေး၊ အမွေဆက်ခံရေးနှင့် သားသမီး စောင့်ရှောက် ထိမ်းသိမ်းရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေအရ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်တွေ ခံစားစေရမည်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒါပင်မဲ့ ဒီ ပြဋ္ဌာန်း ချက်တွေ အတည် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ အစ်မ အနေ နှင့် ဥပဒေ ပညာ သင်ခဲ့ ဘူး တယ်ဆိုရင် တတိယ နှစ် အခြေခံ ဥပဒေ များ ဆိုတဲ့ ဘာသာခွဲ မှာ ဖော်ပြပါရှိပြီပါ … ဒါမှ မဟုတ် ဥပဒေ ဘာသာရပ် ကို လေ့လာ မှတ်သား ထားသူ ဆိုပါက …ထို ဥပဒေ များ ဘာကြောင့် အတည် မဖြစ်ခဲ့ တယ် ဆိုတာလေး ရှင်းပါအုံးမယ် …. ထို ဥပဒေ များ ပြဋ္ဌာန်း သည့် အချိန် မှာ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်နေသည်က တစ်ကြောင်း ၊ အပြောင်းလည်း များသော မြန်မာ နိုင်ငံ ရေး ခြေနေကြောင့် ဖြစ်သည် က တစ်ကြောင်း ၊ ၁၉၆၂ တွင် ဦးနေဝင်း အစိုးရ လက်ထပ်မှာ တစ်ကြိမ် ၁၉၈၈ နဝတ အစိုးရလက်မှာ တစ်ကြိမ် အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ ပါသော ကြောင့် ထို ဥပဒေ များ မှာ အတည် မဖြစ် ခဲ့ ရတာပါ ။
မောင်ဘုန်း January 13, 2012 at 8:26 AM
ကယ် ... မြန်မာ အမျိုး သမီး ဆိုသော ...အစ်မ ရေ ...
အစ်မ ပြောတဲ့ ဥပဒေ များက အတည် မဖြစ်ခဲ့ ဘူး ဆိုတာကို ... ကျနော် ရှင်းပြတာ နှင့် မလုံလောက်ဘူး ဆို၇င် ဥပဒေ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်တစ် ဦးဦး မေးပြီး တိကျတဲ့ ကြောင်းပြ ချက် တစ် ခု တင်ပြ ပြီး ကျနော် ရေးသား ချက် ချက်ကို လွတ်လပ် စွာ ကန့် စွာ ကန့်ကွပ် နိုင်ပါ တယ် ...
ကျနော် လည်း ဒီ ထက် တိတိ ကျကျ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ဖော်ပြပေး ချင်သော် လည်း ကျနော် Post မှာ အရိုးသားဆုံး ဝန်ခံ ခဲ့ပြီးပါပြီ ... ဥပဒေ ဘာသာ ရပ်နှင့် ဝေးကွာ နေသည် မှ ၆ နှစ် ရှိပါပြီလို့... ရေးသားရတဲ့ ရည်ရွယ် ချက် ကို လည်း ဖော်ပြပြီးသာပါ .....
မည်သူမဆို ကျနော် ရေးသား ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့် ရှိပါတယ် ... အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ကျနော် လည်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ဖော်ပြထားလို့ ပါ ....
အခုလို ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ...။
ဒါပင်မဲ့ စာရေးသူ နာလည်း မှု့လွဲနေပါတယ် ..
ကျမ စာရေးသူ ရဲ့ ဖော်ပြ ချက်ကို ကန့် ကွက် ခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး
စာရေးသူ ပြောသလို လွတ်လပ်စွာ ပြောခဲ့တာပါ ရှိပါတယ် ...
ကျမလည်း စာရေးသူ လို ဥပဒေ ဘာသာ သင်ကြားခဲ့ ဘူးလို့ပါ ... အမျိုးသမီး ဆိုင်းရာ အခွင့် ရေးများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ကျမ ဖော်ပြ ထား ဥပဒေ တွေ ရေးထား တွေ့ ခဲ့ လို့မေးကြည့် တဲ့ သဘောပါ ...
တစ်ခု လောက် ထပ်မေး ပါစေ ...။
၁၉၅၄ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီး များ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ဥပဒေ ဟာ ပြောရလောက်အောင် အားနည်း မရှိဘူး လို့ ထင်ပါတယ် .... ရှုပ်ထွေးတဲ့ လှု မှု့ နေထိုင်တဲ့ ပုံစံ ကို ဘယ် ဥပဒေ မှ အတိ ကျ ဖော်ပြ လို့မဘူး ဆိုတာ စာရေးသူ သဘော ပေါက်မည် ထင်ပါတယ် ... ။
ထို့ ကြောင့် ၁၉၅၄ မှ ကနေ့ ထိတိုင် ထို ဥပဒေ ကို အဆက်ဆက် ပြင်ဆင်၍ သုံးစွဲ နေသည် မဟုတ်ပါလော ...
မြန်မာအမျိုး သမီးတစ်ဦး .....
မြန်မာ အမျိုးသမီး များ လက်ထပ် ထိမ်းမြား ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ဟာ ... မြန်မာ အမျိုးသမီး များ အတွက် တန်းတူ အခွင့် ရေး ရှိတယ် လို့ထင်မိတယ် ...
ထို့ ကြောင့် စာရေး သူရဲ့ ဖြေကြား ချက် စိတ်ဝင်တစား စောင့် မျှော် နေမိပါတယ် ... ရှင် ..
တရားရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း တစ်ဦး
မောင်ဘုန်း January 13, 2012 at 8:42 PM
ဟုတ်ကဲ့ ..ပါ ... နောက်ထပ်ရောက် လာတဲ့ တရားရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဆိုတဲ့ အစ်မ ကို ကျနော် ကောင်းကင်ဖြူ မှာ ကြိုဆိုပါတယ် ..
ကျနော် ရှင်းပြ ပေးပါမယ် အခုတော့ ထမင်းစား နားတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေလို့အချိန် အများကြီး မရ သည် က တစ်ကြောင်း .. ၊ ပြည့်ပြည့် စုံစုံ လေး ရှင်းပြ ချင် သည် က တစ်ကြောင်း မို့.... ဒီနေ့ည မှာ ကျနော် ပြန်လည် ဖြေကြား ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ရိုသေစွာ အသိပေး အပ် ပါတယ် .....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 13, 2012 at 11:41 PM
ရည်ရွယ်ချက်ရော အကြောင်းအရာကော သိပ်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပေါ့ကွယ်
မောင်ဘုန်းရဲ့ စေတနာကိုလည်း မြင်မိပါတယ်
အဲ.. ဥပဒေ ဘာညာကိစ္စတော့ အစ်မအနေနဲ့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ ဘာညာရပ် မဟုတ်လို့ ဘာမှ ပြောစရာ ဝေဖန်စရာ မရှိပါဘူး။
အမျိုးသမီးတွေ ဘက်က စာနာ နားလည်ပြီး စေတနာနဲ့ ရေးသားပေးတဲ့ အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်။
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) January 15, 2012 at 5:57 PM
ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရသွားပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ပရင့်ထုတ်ထားလိုက်ပြီ။
ဆုမြတ်မိုး March 26, 2013 at 6:08 PM
တကူးတက မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်း)
Ei Thinzar Maung June 8, 2014 at 4:47 AM
အ မျိုးသမီး ဆိုင် ရာ အခွင့် ရေး က အားနည်းနေတယ်
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် မောင်ဘုန်းးး